XOG: Wacyi-gelinta Coronavirus oo noqotay Mashruuc (Xafiis Sare, Wasaarad & NGO's ku lug yeeshay) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay dagaalka lagula jiro ka hortagga Coronavirus, lana sameeyay Guddiyo kala duwan oo arrintan qaabilsan ayaa waxaa soo baxaya inay socdaan mashruucyo wacyigelin ah oo xafiisyo sare ku lug leeyihiin.
Wacyi-gelinta ku saabsan cudurka Covid-19 ayaa durba waxaa la ogaaday inuu noqday mashruuc ay ku lug yeesheen Qeybta Warfaafinta ee Xafiiska Ra’isal wasaaraha, Wasaaradda Caafimaadka iyo NGO-yo kale, iyadoo dhaqaale lagu bixinayo.
Qeybta Warfaafinta Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa diyaarisay farriimo caafimaad oo ku saabsan Covid-19, waxayna toos ula xiriirtay Warbaahinta Muqdisho qaarkood iyo kuwa Gobollada Dalka si ay muddo laba toddobaad ah ugu baahiyaan farriimahaasi, waxayna u qoondeysay lacago.
Xogta aanu helnay ayaa sheegeysa in qeybta Warfaafinta Xafiiska Ra’iisal wasaaraha aysan xisaab xir iyo wax dokumenti lacag qabasho ah weydiisan warbaahinta ay mashruucaas siisay, waxayna qiime kala duwan u qoondeysay idaacadaha ku yaalla Muqdisho iyo kuwa Gobollada dalka.
Dhinac kale ururro NGO ah sida (Eagle Media Production) ayaa wada farriimo ku saabsan Covid-19 oo mashruuc uga soo qaatay Hay’addo samafal, iyadoo lasoo mariyay Wasaaradda Caafimaadka waxayna adeegsadaan oo heshiis la galeen isla warbaahinta ay farriimaha ka sii deyso qeybta Warfaafinta ee Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha.
Inta badan warbaahinta ayaa markii hore isu xil saartay inay dadka ka wacyi geliso dadka cudurka Coronavirus, iyagoo u arkay waajib saaran, laakiin waxaa arrintii meesha ka saaray mashruucyada is barbar socda iyo lacagta lagu bixinayo wacyi-gelinta cudurka Covid-19.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta gaarsiiyey farriimo telefoonadu kusoo dhacayaan oo ku saabsan wacyi gelinta Cudurka Coronavirus.
Waxaa la ogyahay Agaasimihii guud ee Wasaaradda Caafimaadka iyo agaasimihii maaliyadda Wasaaradda ay u xiran yihiin arrimo musuq, Arrinta Covid-19-na loo sameeyay Guddi dhowr ah oo hoos taga Ra’iisal wasaaraha.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday Taliyihii iyo taliye ku-xigeenadii Booliska Puntland
Next article9 Qof oo ku dhimatay Isbitaal Martiini & Digniin ka timid Wasaaradda Caafimaadka